Somalia: Mooshinka Farmaajo: Waxyaabaha u horseeday Soomaaliya in xilligan ay gasho qalalaase siyaasadeed - Wargane News
Home Somali News Somalia: Mooshinka Farmaajo: Waxyaabaha u horseeday Soomaaliya in xilligan ay gasho qalalaase...
Somalia: Mooshinka Farmaajo: Waxyaabaha u horseeday Soomaaliya in xilligan ay gasho qalalaase siyaasadeed
Xilli ay sare u sii kaceyso xiisaadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Soomaaliya, sua’aasha la is weydin karaa waxay tahay, maxaa dhaliyay in guddoonka baarlamaanka loo gudbiyo mooshin la doonayo in xilka looga qaado madaxweyne Farmaajo.
Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa BBC-da u sheegay in mooshinka uu ku soo beegamayo xilli ay dalka ka taagan tahay ismari-waa siyaasadeed oo uu ka mid yahay khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Khilaafka Maamul Goboleedyada iyo dowladda dhexe
Madaxda maamul Goboleedyada ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe inay ka gaabisay howsha ku aaddan sugidda amaanka iyo in madaxweynaha uu ka baxay heshiisyo badan oo uu la galay Maamul Goboleedyada.
Dr Cabdiwahaab wuxuu yiri “Waxaa ka mid ah heshiisyo badan oo lala galay in looga baxay..waxaa ka mid ah amniga uu wax fiican ka qaban waayay, waxyaabaha ay ku eedeynayaan waxaa ka mid ah heshiisyo badan oo uu saxiixayo oo aysan dowladda ogeyn”.
Waxayna sidoo kale ku eedeynayaan dowladda dhexe inay xallin weysay khilaafka kala dhexeeyo Maamul Goboleedyada.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku kacsan xukuumadda, waxayna dhaliil u jeedinayaan sida ay wax u waddo dowladda.
Horraan ayay ahayd markii, dowladda Federaalka Soomaaliya ay xabsiga dhigtay qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ka dib markii lagu eedeeyay inay ka shaqeynayaan sidii dowladda loo dumin lahaa.
Cabdiwahaab wuxuu yiri “Waxaa jira niman badan oo siyaasiyiin ah oo la weeraray oo wali careysan”.
Warqad ay soo saareen xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka waxay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu ku xaadgudbay qodobo dastuuri ah isla markaasna ay gudbiyeen hindisaha xil ka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dhanka kale, war saxaafadeed ka soo baxay golaha iskaashiga maamul goboleedyada ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha.
Dad fara badan ayaa aaminsan in Soomaaliya ay caado ka noqotay in in dhinacyada isku haya siyaasadda ay taageero u raadsadaan dalalka dibadda, balse waxay hadda is weydiinayaan, ma la is dhihi karaa arrintan dalal shisheeye ayaa lugta kula jiraa.
Profesor Cabdiwahaab wuxuu sheegay in weli ay jiraan gacmo shisheeye oo saameyn ku leh siyaasadda dalka Soomaaliya.
“in gacmo shisheeye ay meesha yimaadaan, qaarna ay taageeraan mucaaradka qaarna ay dowladda taageeraan, wax iska caadi ah ayey noqotay, sababtoo ah dalku waa dal burbursan, marka gacmihii shisheeye ee dalka la haray wali kama aysan bixin, way dhici kartaa waxa ayna u badantahay in fara galin shisheeye ay ku lug leedahay arrintan” ayuu yiri Cabdiwahaab.
Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha ay xoojiyaan dimuqraadiyadda isla markaasna aysan u cagajugleynin xildhibaanada horkacaya mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha.
Sirta Geerida Yar: Maxaa Jidhkeenna Ku Dhaca Marka Aynu Seexanno Maxaa Se’ Sabab U Ah (Q. 1)
Somaliland: Top Al-Azhar Scholars Pledge Promote Education
Somaliland: Yuusuf Cabdi Gaboobe Oo Musuqmaasuq Iyo Xatooyo Aan Xad Lahayn Ku Eedeeyey Wasiirka Macdanta